Uzithintele umasikandi obize ezeBhova ngamapaklaza - Ilanga News
Home Izindaba Uzithintele umasikandi obize ezeBhova ngamapaklaza
Uzithintele umasikandi obize ezeBhova ngamapaklaza
Abafana bakaMgqumeni bathe badumele ngalesi senzo
UNELISANI noSakhiseni” Mseleku beqembu Abafana bakaMgqumeni.
LIYAVEVA iqembu lomculo kamaskandi, aBafana bakaMgqumeni, elibalwa nahamba phambili kulo mculo, elisola omunye umculi ngokushiya angalazi kulona elibiza ngezibhuklabhukla zezidudla ezivimbe noshuni kaKwakhe “Mgqumeni” Khumalo, iBhova likaDikadika.
UNavigator Gcwensa ongumculi kamasikandi waseMpangeni, uzithintele iminyovu kuleli qembu eliholwa nguNelisani “Jezekhulu” Mseleku ngenkathi ekhipha i-albhamu ethi “2 Idiots” eshiya angalazi kulaba baculi ebasola nangokuthi balokhu bethi (lo shuni okuthiwa bagweva nawo) ngokamzala wabo.
UNelisani utshele ILANGA ukuthi bona kabasisona isitebhisi sokukhwela abaculi abasafufusa. Uthi kumdumazile ukuhlaselwa kwabo yilo mculi ngoba kabamazi nakumazi.
“Lo mfana kangimazi nakumazi, ngisadumele namanje. Ngeke ngize ngithi vu kuyena, sibadala kabi emculweni ukuthi sesingalwa nezingane. Ngiyahlonipha ukuhlonipha, kodwa akusho ukuthi mangidelelwe yizingane. Le nto ayenzayo ifana nomuntu onciza indlovu ngoba kayizwa buhlungu,” kusho uNelisani.
Kule ngoma ebuye ibe yisihloko se-albhamu, uNavigator uthi leli qembu kaliwuphiwe umculo. Uqhubeka athi uNelisani uke waphuma engena ezibhedlela ngenxa yezifo zamantombazane ngoba uculela isifazane.
Ebuzwa uNavigator ngalokhu, uthe kusekuncane lokhu akukhulume ngaleli qembu. Uthe kayikho impi ekhona phakathi kwakhe naleli qembu ngaphandle kwengoma.
“Kumele ngabe babonga ukuthi ngibakhuphulile, basematheni njengamanje. Konke lokhu engingabatshela khona bayakwazi nabo, bangangishaya uma bengishaya, uma nje bengangibulalanga,” kusho uNavigator.
Le albhamu isematheni kubalandeli bakamasikandi kanti aBafana bakaMgqumeni phambilini bathi kabasazithandi izimpi zomculo emuva kwengxabano yabo nomholi weqembu lo-Saziwayo, uKhangelani “DsD” Mhlongo.
ABafana bakaMgqumeni yiqembu eselihlomule kakhulu emincintiswaneni yezindondo selike laya nakwamanye amazwe ngenxa yawo umculo kubalwa kuwona neRussia.
Previous articleNgeke ashenxe esikhundleni sakhe uMagashule
Next articleKuboshwe usibari ngokufa kwesoka